မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: July 2011
ကျွန်တော်တို.ပါတီက NLD ရဲ့ငွေချေးလုပ်ငန်းများအစီအစဉ်ကိုကန်.ကွက်ခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ယခုကျွန်တော်တို.ပါတီ ရဲ့ဘလောက်စာမျက်နှာမှာ ၂၄ရက် မေလရက်စွဲနဲ.ဖေါ်ပြခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို.ကို အီးမေးနဲ.သာမက လူကိုယ်တိုင်ပါ လာရောက်ကန်.ကွက်သူများရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက NLD ကထုပ်ချေးတဲ့ငွေပမာဏ ဟာ ကျပ်သိန်း ၅၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို.အား ကန်.ကွက်သူများက ပြည်သူ ဟာ အလွန်ဆင်းရဲနေတဲ့အကြောင်း NLD အနေဖြင့် အလွန်ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသောပြည်သူ အား ထောင်ပံ့နေခြင်းကို ကန်.ကွက်ခြင်းဟာ မိုက်မဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ကန်.ကွက်ခြင်းကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖို.နဲ. နောက်နောင် NLD ရဲ.လုပ်ရပ်များကို မကန်.ကွက်ဖို.ပါ တားမြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို.က နိုင်ငံရေးပါတီဆိုသည်မှာ ငွေချေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ပြည်သူကို မကယ်တင်ရကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို.က ကျပ်သိန်း ၅၀ ထုပ်ချေး နိုင်လျှင် ကြံ့ဖွတ်လိုပါတီမျိုးက ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကို အလကား ပေးလိုက်နိုင်ကြောင်း၊ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေလို သူဌေးတစ်ယောက်ကပင်လျှင် ဒေါ်လာ သန်းနဲ.ချီ၍ အလကားပေးနိုင်ကြောင်း။ ဤသို.သာ အပြိုင်အဆိုင်ငွေထုပ်ချေးခြင်း၊ ငွေထုပ်ပေးခြင်းလုပ်ကုန်ကြလျှင် တိုင်းပြည်ပျက်၍ မဲဆွယ်ခြင်း ၊ မဲဝယ်ခြင်း စသော ညစ်ထေးသည်. နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုများ ထွန်းကားလာပြီး တိုင်းပြည်၏ အလားအလာမကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို.မှပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ NLD ၏ စေတနာနှင့် ကျွန်ုပ်တို.အားဝေဖန်သူများ၏ စေတနာကိုလည်း နားလည်ပါကြောင်း သို.သော်လည်း ငွေချေးလုပ်ငန်းများကိုတော့ ကန်.ကွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို. မှပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်။
ယခု ကြံ့ဖွတ်မှငွေထုပ်ချေးနေပါပြီ ပြည်သူ.ကောင်းကျိုးလုပ်တယ်ဆိုပြီး ထောက်ခံလိုက်ကြမလား။ ကန်.ကွက်တယ်ဆိုရင် တော့ပြည်သူနဲ.ပါထိပ် တိုက်တွေ.ပြီပေါ့။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ကြံ့ဖွတ်လုပ်ရပ်မှန်တယ်လို ပြော နိုင်မလား။ အားလုံးစဉ်းစားကြဖို.ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ပြည်သူ ကို ပိုက်ဆံထုပ်ချေးပြီး ပြေလည်သွားအောင်လုပ်လို.မရပါဘူး။ ဒါဆိုပိုက်ဆံထုပ်ချေးတော့နည်းနည်းပါးပါး ဖြစ်ဖြစ်ပြေလည်သွားတာပေါ့လို.ကပ် သပ် ပြောလို.တော့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆင်းရဲသားတွေကို ငွေထုပ်ချေး တဲ့ သူဌေးကြီးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ နိုဘယ်ဆုတောင်ရသွားပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို.ဆိုလိုချင်တဲ့အချက်က နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ရဲ့ အလုပ်က ပိုက်ဆံထုပ်ချေးခြင်းမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် တင်ပြရရင် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်အနေဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များကိုဆင်းရဲတွင်းနက် ပြည်သူများအား ငွေမည်၍ မည်မျှထုပ်ချေးစေရန်အတွက် အစိုးရမှ အရေးပေါ်ဥပဒေ ပြဌန်းစေခြင်းမျိုးလုပ်ရန် ဆောင်ရွက်မှုမျိုးပြုလုပ်စေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ရဲ့ အလုပ်လို.သတ်မှတ်လို.ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို.ပင်ဖြစ်စေ ရှေ.မျက်နှာနောက်ထား ပြီး ပြည်သူ.အတွက်ချေးငွေအစီအစဉ်များကို ကန်.ကွက်ရပါတော့မယ်။ ဒါလည်းပြည်သူ.အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ တိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့ တင်ပြချက်ကို ဖတ်ရသူများ COMMENT BOX မှာဝေဖန်မှုပြုဖို.ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ပြည်သူဟာ အခုချိန်မှာ ကြံ့ဖွတ်ရဲ့ငွေချေးလုပ်ငန်း တွေကို ပြင်းထန်စွာမဆန်.ကျင်ကြဘူးဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ညစ်ထေးတဲ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုများထွန်းကားလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၀န်ကြီးချုပ်သက်ဆင်လက်ထက်က ကျေးရွာတစ်ရွာကို ဘတ်တစ်သန်းထောက်ပံ့မယ်လို. ကြေငြာပြီးမဲနိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အမှန်တော့ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာနဲ.မဲဆွယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကိုနားမလည်တဲ့ပြည်သူက သက်ဆင်ကို တစ်ခဲနက်မဲပေးခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ညစ်ထေးတဲ့ မဲဆွယ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအရှိန်က အခုထိရှိနေသေးလို. သက်ဆင်ရဲ့ညီမ ၂၀၁၁ မှာ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့ပြန်ပါပြီ။ သက်ဆင့်ညီမကလည်း ထိုင်းလယ်သမားတွေဆီက စပါးကို တိုင်းပြည်မှ ဈေးကြီးပေးဝယ်မယ်ဆိုပြီး မဲဆွယ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါလည်း တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို ခုတုန်းလုပ်ပြီးမဲဆွယ်တာပါပဲ။
ကြံ့ဖွတ်ငွေချေးတာကို မကန်.ကွက်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို.ဟာတိုင်းပြည်နဲ. ပြည်သူအပေါ်မှာ တကယ်ပဲတရားပါ့လား အားလုံးစဉ်းစားကြဖို.ဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ဖွတ်ငွေချေးလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ် သတင်းကို အောက်မှာပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျပ်သိန်းပေါင်း တသိန်း ရန်ကုန်မှာ ကြံ့ဖွံ့ထုတ်ချေး
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၈ မိနစ်
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ။ ။ ချေးငွေယူလျှင် ပါတီဝင်ရသည့် ကျပ်သိန်းပေါင်း တသိန်းအား ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ထုတ်ချေးခဲ့ကြောင်း အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တိုင်းတာဝန်ခံ ဦးအောင်သိန်းလင်းက ပြောသည်။
ကြာသပတေးမနက် ၁ဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ကြံ့ဖွံ့ရုံးချုပ်၌ ကျင်းပသော ၎င်းတို့ပါတီနှင့် အခြား ၅ ပါတီမှ လူငယ်များ ဂျပန်သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အကြောင်း ရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနား၌ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အတိုးနှုန်း ၂ ကျပ် ယူသည့် အသေးစား ချေးငွေ
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရန်ကုန်တိုင်း တာဝန်ခံ ဦးအောင်သိန်းလင်း (ဓာတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)
သိန်းပေါင်း ၇ သောင်းနှင့် လယ်သမားများကို စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေ သိန်းပေါင်း ၃ သောင်း ထုတ်ချေးခဲ့ကာ၊ ရရှိလာမည့် အတိုးများကို လူထုကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဦးအောင်သိန်းလင်းက ပြောသည်။ သူသည် လက်ရှိ တောင်ဥက္ကလာပ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းလည်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ စည်းရုံးရေးမှူးတဦးက ‘‘ မြို့နယ်ကို ဒီလောက် ငွေချေးပေးနေတာ၊ ပါတီကိုလည်း သိတတ်ရမှာပေါ့၊ ပြည်သူနဲ့ အပြန်အလှန်ပေါ့ ဆိုတာမျိုး ပြည်သူကို ပြောပြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ငွေချေးတယ်။ လူတွေကလည်း ပါတီ ဝင်ကြတယ်။ ငွေချေးလို့လေ’’ ဟု ဆိုသည်။
မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့ခံတဦးကလည်း ‘‘ကျမတို့ကို တယောက်ကို ၃ သောင်း ချေးတယ်။ ကျမတို့အဖွဲ့မှာ
ဦးအောင်သိန်းလင်းက ရန်ကုန်၌ (ဖြိုးစေတနာ) အခမဲ့ဆေးခန်း ၃၅ ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့သလို သမိုင်းလမ်းဆုံတွင် ၆ ထပ်
ဆေးရုံဖွင့်ကာ အခမဲ့ မျက်စိခွဲစိတ်ပေးနေပြီး၊ အင်းစိန် GTI ၌ အခမဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်းကို
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မကြာမီတွင် အခမဲ့ သားဖွားဆေးရုံ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သေးသည်
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:13 AM3comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာဟာ မီဒီယာလောက နဲ. နိုင်ငံရေးလောကမှာ ၂၀၁၁ အတွက် အထူး ခြားဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါပြီ၊ စာပါအကြောင်းအရာ ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်း ကြားဖူးနေကြသတင်းဖြစ်ပေမဲ့ NLD မပါပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးကြိုပမ်းချက်က ပထမဆုံးဖြစ်နေ ခြင်းပါပဲ။ နောက်တစ်ခုကတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနဲ. အစိုးရသစ်ကြားမှာ ပေါင်းကူးမလိုလို သတင်းဖြစ်စေတဲ့အချက်ပါပဲ။ အမှန်တော့ စာပါအကြောင်း ရာထဲ မှာ အစိုးရနဲ. ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမယ်လို.တော့ တိတိပပ မပါဝင်ပါဘူး။
NLD နာမယ်နဲ.အဘယ့်ကြောင့် ကြေငြာချက်မထုတ်ရတာပါလည်း ဆိုတာကို NLD ခေါင်းဆောင်များရဲ့ဖြေ ကြားချက်ကလည်း NLD ဟာတရားမ၀င် တော့ ဘူးဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်စေပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မီဒီယာမှာ ပြောသမျှတွေကို ပါတီရဲ့စကားအဖြစ် သူတို. သတ်မှတ်ချင်ရင် သတ်မှတ်ပါတယ် ။ သူတို.စကားမှားသွားရင် ပါတီရဲ့အာဘော်မဟုတ်ဘူးလို.ပြော လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက ကာနယ်ကြည်မောင် စကားမှားပြီး စစ်အစိုးရကို ခုံရုံးတင်မလိုလိုပြောခဲ့ တာကို ယခု ခေါင်းဆောင်တွေက ပါတီရဲ့အာဘော်မဟုတ်ဘူးလို.ဆိုပြန်ပါပြီ။ ဒီလိုသာဆို နောင်တစ်ခါ ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က စကားမှားခဲ့ရင်လည်း ဒီလိုပဲလွှဲချဦးမှာပါပဲ။ ကာနယ်ကြည်မောင်ရဲ့ စကားထဲမှာလည်း စစ်ခုံရုံးတင်မယ်လို.တော့တိတိပပ မပါဝင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီသဘောသက်ရောက် တယ်ဆိုတာတော့ အဲဒိအချိန်က အားလုံးသိကြပါတယ်။
ယခုလည်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို စစ်ခုံရုံးတင်မယ်လို. NLD ကကြေငြာချက်ထုတ်ပြီး မပြောပေမဲ့ အဲဒိသဘော သက်ရောက်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အမြဲပဲပြောနေတာပါ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကောင်မရှင်ဖွဲ.ဖို. NLD က မီဒီယာမှာ အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ စုံစမ်းလို. ပြစ်မှုထင်ရှားရင် NLD ကဘာလုပ်မှာလဲ လွတ်ငြမ်း ချမ်းသာခွင့်ပေးမှာလား။ ဒါဆို အစကတဲ့က စုံစမ်းမနေပါနဲ. လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးပါတယ် အားလုံး တစ်က စလိုက် ရအောင်လို.ပြောလိုက်ရင် မပြီးဘူးလား။ စစ်အစိုးရ လက်ထက် စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေကြူးလွန်တာ အင်အယ်ဒီကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရတာပဲ ဒီပဲရင်းကိစ္စကို NLD က မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးပြီပဲ။ ဘာတွေကို စုံစမ်းနေ ဦးမှာလည်း။ ခင်ဗျားမဟုတ်တာလုပ်တာတွေ ကျုပ်စုံစမ်းမယ်ဆိုမှတော့ ခင်ဗျားနဲ.ကျုပ်နဲ.ဘယ်တဲ့ တော့မှာလည်း ဆိုတာကိုနားလည်ဖို.ကောင်းပါတယ်။
NLD ရဲ.မူဝါဒ ရေးရာမှာ ရှေ.နေတွေ လွှမ်းမိုနေပါတယ် နိုင်ငံရေးသဘောကို တရားရုံးမှာရှေ.နေပြောသလို ပြောနေလို.မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို.တိုင်းပြည်ကိုစီးပွားရေး ပိတ်ဆို.ဖို.တစ်ခါမှမပြောဘူးပါဘူး ဒါဟာအင်အယ်ဒီရဲ့မူဝါဒလည်းမဟုတ် ပါဘူး ဆိုပေမဲ့ အခြားသောစကားလုံးတွေက စီးပွားပိတ်ဆို.စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ အဲဒီလို ရှေ.နေတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးဝေ့လည်ကြောင်ပတ်တွေကို နိုင်ငံရေးမှာ သုံးလို.မရပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ.နေတွေနဲ. အလုပ်လုပ်ဖို.မကောင်းတော့ပါဘူး။
အခုတော့ NLD ရှေ.နေများရဲ့ဆင်ခြေအောက်မှာ NLD ဆိုတာကို ဘေးချိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ကိန်းဆိုက်နေပါ ပြီ။ NLD မရှိလည်း နိုင်ငံရေးလုပ်လို.ရတယ်ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD ခေါင်းဆောင်တွေကို လက်တွေ.ပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
NLD ခေါင်းဆောင်တွေက တော့ NLD မရှိရင် နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို.ခက်ခဲတော့မှာပါ အစကထဲက NLD ကို တရားမ၀င်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ မူဝါဒတွေကို ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းတင်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သူဟာ ဗမာပြည်ကွန်မြူ နစ်ပါတီက ခိုင်းတာကို လုပ်နေရတဲ့သူပါ။
ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို.လိုအပ်နေသရွေ. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ကျွန်ုပ်တို. ၈၈ ကျောင်းသား ဟောင်းတွေဖွဲ.စည်းထားတဲ့ပါတီမှာ ပါဝင်ဦးဆောင် ဖို. ကျွန်ုပ်တို.က တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ဟာ လူတစ်ကာရဲ့ ဆဲသမျှကို ခံယူပြီး အစစ်အမှန် နိုင်ငံရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို.ကို စစ်အစိုးရလူလို.ပြောတဲ့အထဲမှာ ဦးဝင်းတင်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀င်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ဝဲ နိုင်ငံရေးသမားပီပီ ကျွန်ုပ်တို. လက်ယာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ လက်ယာနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ပြောညံ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး မပြောညံ့လို.ပဲ အာလုံးနဲ.ဆန်.ကျင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအယူအဆကို တင်ပြနေတာပါ။ အချို.လူငယ်တွေက ထက်ထက်မြက်မြက် လုပ်ကိုင်ရတာနဲ.ပတ်သက်လာရင် လက်ဝဲ ဆန်တယ်လို.ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး လက်ဝဲ နိုင်ငံရေးသမားတွေသာ ထက်မြက်မှုမရှိပဲ ကွန်မြူပါတီက ခိုင်းသမျှကိုလုပ်လေ့ရှိတာပါ ။လက်ဝဲ သမားတွေကို ထက်မြက်တဲ့အသွင်ရှိအောင် ကွန်မြူနစ် ပါတီက ရဲရဲတောက် မူဝါဒတွေကိုပဲချမှတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီရဲရဲတောက်မူဝါဒတွေကပဲ NLD ကို တရားမ၀င်ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ လက်ယာနိုင်ငံရေးသမားတွေထက်မြက်ခဲ့လို. လွတ်လပ်ရေးရပြီး စမြန်မာ နိုင်ငံဟာ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံမဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဦးနေ၀င်း မ ဆ လ ပါတီထောင်တော့ မ. ဆ. လ ပါတီထဲဝင်လုပ် သူတွေဟာ လက်ဝဲနိုင်ငံရေးသမားတွေသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ယာအုပ်စုမပါ ပါဘူး၊ အနဲအကျဉ်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။ မ ဆ လ ရဲ့ မူဝါဒ ရေးရာဌာနမှုးတွေဟာ ကွန်မြူနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲထပ်ဝင်လို. အာဏာရတောင် NLD ခေါင်းဆောင်တွေနဲ.မထိုက်တန် ပါဘူး။ သူတို.တွေဟာ အာဏာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ မဟုတ်ပါဘူးလို.ဆင်ခြေပေးကောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လူထုအတွက်အာဏာရအောင်လုပ်တာပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီရေးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူ.အတွက် အာဏာရအောင်ဆောင်ရွက်တာပါ။
အကယ်၍များ ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းသူဟာ အာဏာရဖို. အတွက်လမ်းစမရှိတော့ဘူးဆိုရင်၊ ဒါမှမ ဟုတ် လည်း အာဏာရရှိရေးလမ်းကြောင်းကို သွေဖီတော့မယ်ဆိုရင် မူဝါ ဒ မှားယွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရေးမှာ တိုင်းပြည်အာဏာရဖို.ထက်ပိုအရေးကြီးတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်နေတဲ့အရာကတော့ NLD တရားဝင်ဖို.အတွက် ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားနေဟန်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို.မှာ အဖြေရှိပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 7:16 AM2comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးအောင်ကြည်တို.တွေ. ဆုံ ဆွေးနွေးချက်များ ကိုအင်အယ်ဒီပါတီတွင်းဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။ ဦးအောင်ကြည်တင်ပြလာသောအချက်များမှာ အင်အယ်ဒီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကောင်မရှင်တွင် ပါတီမှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပြည်ထဲရေးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်းအဓိကတင်ပြတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ NLD နေဖြင့် ၎င်း တို.အစိုးရအား ယုံကြည်စွာဆက်ဆံရန်ဖေါ်ပြပါရှိပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်၍ စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် NLD မှတစ်တတ်တစ်အားပါဝင်ပါရန်လည်း တင်ပြပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းရေးများကို ပြင်ပမီဒီယာများသို. ထုပ်ဖေါ်ခြင်းမပြုဖိုကိုလည်းဦးအောင်ကြည်က အထူးဂရု ပြုတင်ပြတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ တရားဝင်တွေ.ဆုံခြင်းဖြစ်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အားတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ကိစ္စများနဲ.ပတ်သက်ပြီး အထူး ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်လိုသည့်လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်သူများ၊ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြောင်း တင်ပြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်မှ NLD အနေဖြင့် တရားဝင်ရပ်တည်ဆဲပါတီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ကနဦးအနေ ဖြင့်လုပ်ဆောင်လိုသည့်အချက်များကို ပါတီတွင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရဖက်မှ အပြုသဘောဆောင်သည့်လုပ်ရပ်များပိုမိုလုပ်ဆောင်ဖို.လိုအပ်ပါကြောင်း။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများလွတ်ပေးရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းများကို NLD အနေဖြင့်မြင်ခြင်ပါကြောင်း။
ဦးအောင်ကြည်မှ တိုင်းပြည်အေးချမ်းတည်ငြိမ်သည်နှင့်အမျှ အကျဉ်းသားများကိုလွတ်ပေးသွားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း။ ၎င်းတို.အနေဖြင့် တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း အစိုးရနေဖြင့် လုပ်ငန်းအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရသည်မှာ စေ့ငှဖို.မလွယ်ကူပါကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို.အနေဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ NLD ပါတီ အမှုဆောင်များနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ပါတီ၏ ရပ်တည် ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အစိုးရမှလည်း သိသာသော အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ခြင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်ပေးခြင်းများလုပ်ပေးရန်တင်ပြခဲ့သည်။
နှစ်ဖက်အဖွဲ.အစည်းများအတွင်း အသီးသီးဆွေးနွေးကြပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံတွေ. ဆုံကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို.အနေဖြင့်သုံးသပ်သည်မှာ ဦးအောင်ကြည်မှ NLD သို. တရားဝင်ရပ်တည်၍ အစိုးရအား ထိပ်တိုက်ရင် ဆိုင်မှုများမလုပ်ရန် ချိုချိုသာသာ ဖြင့်လာရောက်အသိပေးခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပြီး NLD အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါက အစိုးရနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများသာဖြစ်လာနိုင်သည် ဟုသာယူဆပါသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:42 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:00 PM 1 comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည် ဆွေးနွေးပွဲ အစိုးရသတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြချက်
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:45 AM0comments Links to this post
အင်အယ်ဒီပါတီဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ. ဦးအောင်ကြည် တွေ.ဆုံပွဲများနဲ.ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သတင်းထုတ်ပြန် လေ့မရှိပါဘူး ။ ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့လေ့လာချက်များအရ အစိုးရဘက်မှ သတင်းထုတ် ပြန်မှုမပြုလုပ်ဖို.တားမြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို.ဆိုပါတယ်။ ဦးအောင်ကြည်နဲ. ၂၀၁၀ အတွင်းနောက်ဆုံးတွေ.ဆုံပွဲမှာဆိုရင် အင်အယ်ဒီအနေနဲ. အစိုးရအားပြောဆိုလိုသောကိစ္စများကို အဘယ့်ကြောင့်မီဒီယာမှပြောနေရပါ သလဲဟုမေးမြန်းခဲ့ပြီး နောက်နောင်မီဒီယာမှ မပြောပဲ တာဝန်ရှိသူများကိုသာ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုရန် ဦးအောင်ကြည်က ပြောခဲ့တယ်လို.ဆိုပါတယ်။
ယခုတွေ.ဆုံပွဲနဲ.ပတ်သက်လို. ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ အောက်ပါအတိုင်းခန်.မှန်းသုံးသပ်ထားပါတယ်
ဦးအောင်ကြည်ပြောကြားနိုင်သော အရာများ မှာ အင်အယ်ဒီအား တရားဝင်ရပ်တည်လိုလျှင် ရွေးကောက်ပွဲကောင်မရှင်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုများ ရုတ်သိမ်းရေးတွင် အင်အယ်ဒီမှာ ပါဝင်ရန်။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများမလုပ်ပဲ တရားဥပဒေဘောင်တွင်းမှသာဆောင်ရွက်ရန်။ ဆွေးနွေးပွဲအား သတင်း ထုပ်ပြန်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်တို.ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဦးသိန်းစိန်နဲ.ဆွေးနွေးဖို.ကမ်းလှမ်း နိုင်ပြီး၊ အင်အယ်ဒီဟာ တရားဝင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အခြေတင်ပြောဆိုဖွယ်ရှိပါတယ်။
မည်သို.ပင်ဖြစ်စေ အင်အယ်ဒီကတော့အသေးစိတ်ကို တရားဝင်သတင်းထုပ်ပြန်တာမျိုးတော့လုပ်မယ်မထင်ပါဘူး အီးယူအဖွဲ. မြန်မာပြည်ကိုလာတုန်းကတောင် ဒေါ်စုဘာတွေပြောခဲ့သလဲဆိုတာကို အတူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဦးသုဝေ ပြန်ပြောပြမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုတွေဆက်လက်ထားရှိဖို. တင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုသိခဲ့ရတာပါ ။အဲဒီတုန်းက အစပိုင်းမှာ အင်အယ်ဒီက သတင်းထုပ်ပြန်ဖို. ငြင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ စီးပွားပိတ်ဆို.ဖို.ပြောခဲ့တာကို ပြည်သူကို မတင်ပြရဲလို.ထင်ပါတယ်။ အင်အယ်ဒီက ဒါမျိုးတွေကြိတ်လုပ်တာ များနေပါပြီ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အင်အယ်ဒီအနေနဲ. သတင်းထုပ်ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ခု ကို သိသိသာသာပြုလုပ်ဖို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူများကိုတင်ပြချင်တာကတော့ အဖက်ဖက်က စင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ အစိုးရက အင်အယ်ဒီကိုကြောက်လို. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးအောင်ကြည်က တရားဝင်တွေ.ဆုံတယ်လို.တော့ အထင်မရောက်စေချင်ပါဘူး။ အလွန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့ အင်အယ်ဒီကို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ လာပြောသွားတာပဲဖြစ်နိုင်ပြီး လက်မခံရင် အင်အယ်ဒီရုံးခန်းကိုဝင်စီးတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပထမ အဆင့်ကြိုးပမ်းမှုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:02 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည် ဆွေးနွေးပွဲ အား ဘီဘီစီ သတင်းဌာန၏ ဖေါ်ပြချက်
The Burmese government recently warned Aung San Suu Kyi to stop all political activities
Hopes and fears for Burma
Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has held her first formal meeting withaminister of the army-backed civilian government.
Labour minister Aung Kyi described the talks as positive.
He said the rule of law and ways to eliminate misunderstandings for the good of the people had been discussed.
Aung San Suu Kyi has often appealed for political dialogue, but the Burmese government recently warned her to stop all political activities.
The talks, which lasted just over an hour, took place atastate guesthouse in Burma's main city of Rangoon.
Aung San Suu Kyi had met Aung Kyi several times during her years under house arrest, in his liaison role under the previous military government.
This is the first known contact between the 66-year-old and the new, nominally civilian government since her release from detention in November, shortly after the country's first election in 20 years.
With Aung San Suu Kyi standing beside him, Aung Kyi read outastatement saying: "Discussions were focused on possibilities for co-operating in the interests of the people.
"This included the rule of law and overcoming disunity, and matters that will benefit the public."
The meeting comes justamonth after the government warned Aung San Suu Kyi to stop all political activities and cautioned against her travelling outside Rangoon.
But Aung San Suu Kyi recently went ahead withatrip to the town of Bagan and has continued to conduct interviews with international media and maintain close contact with international diplomats.
The BBC's South East Asia correspondent Rachel Harvey says the mere fact the government has renewed direct contact has raised hopes that perhaps the door to negotiation has been reopened.
News of the meeting leaked out after the US Secretary of State Hillary Clinton called for "concrete measurable progress" by the Burmese government, at regional security talks held in Bali on Saturday.
The true test of these talks will be to see if anything substantive emerges - or whether it turns out to be another carefully choreographed piece of window-dressing much in the manner of the Burma of old, our correspondent says.
Aung San Suu Kyi was excluded from the November elections held by the military rulers, and her political supporters boycotted it.
Military-backed parties won by far the largest number of seats; the ruling generals said the poll markedatransition to democracy, but opposition groups and Western nations condemned it asasham.
Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party wonaresounding victory in Burma's elections in 1990, but was kept from power by the military junta.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:08 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည် ဆွေးနွေးပွဲ အား ဘန်ကောက်ပို.စ် သတင်းဌာန၏ ဖေါ်ပြချက်
Suu Kyi first talk with new Burma govt
Published: 25/07/2011 at 02:32 PM
Aung San Suu Kyi met withaminister of Burma's new government for the first time on Monday, raising tentative hopes of sustained dialogue between the opposition icon and authorities.
Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi (C) is greeted byasupporter in the country's ancient temple city of Bagan. Aung San Suu Kyi has metaminister of Myanmar's new government for the first time Monday, raising tentative hopes of sustained dialogue between the opposition icon and authorities.
Just days after the US called for "concrete" progress towards democracy, Suu Kyi -- who was released from house arrest soon afteracontroversial election in November -- began talks with labour minister Aung Kyi in Rangoon.
"They are meeting now,"agovernment official told AFP without offering further details, as reporters waited outside the venue --astate guesthouse in Burma's main city.
Suu Kyi has frequently urged dialogue with the government since her release, but the authorities' decision to hold talks met withamixed reaction from observers, with some seeing it as aimed at gaining concessions from the international community.
Details of the meeting's agenda were not clear, Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) party spokesman Nyan Win told AFP on Sunday, but he earlier saidameeting between the two sides would be "good".
Aung Kyi was in charge of relations between the military junta and Suu Kyi under Burma's previous regime, but this was to be the first meeting between them since the new government was formed, an official told AFP at the weekend.
The dialogue is due to take place in the early afternoon atastate guesthouse. The pair have met before on several occasions, including in late 2009 while Suu Kyi was still underaseven-year period of house arrest.
The 66-year-old democracy champion was freed shortly after elections that were won overwhelmingly by the military's political proxies. The polls were marred by claims of cheating and the exclusion of Suu Kyi from the process.
The government has since warned her to stay out of politics.
News of the planned meeting with Aung Kyi emerged on Saturday, the same day that US Secretary of State Hillary Clinton urged Burma's rulers to have "meaningful and inclusive dialogue" with the opposition.
A US official travelling with Clinton also said the Burma government's bid for the chairmanship of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) in 2014 would be in doubt unless it reformed its ways.
The timing of the meeting was therefore significant, said political analyst Pavin Chachavalpongpun of Singapore's Institute of Southeast Asian Studies.
"They could have done it any week, so why this week?" he said, adding that the talks had "symbolism" and showed "both sides are trying to do some kind of constructive engagement".
Suu Kyi has spent much of the last 20 years asaprisoner in her Rangoon home, and some observers believe the government would be quick to limit her freedom again if she is perceived asathreat to their rule.
Renaud Egreteau,aBurma expert at Hong Kong university, said it was likely the talks were happening because "the regime wants to get something from the international community".
The US House of Representatives on Wednesday approvedarenewal of sanctions that ban the import of goods from Burma, including lucrative gems, and restrict visas issued to government officials.
Suu Kyi has said international sanctions should be maintained, at least until Burma's more than 2,000 political prisoners are released.
She has tested the boundaries of her freedom this month, in particular with her first visit outside Rangoon since her release, when she refrained from any overt political activities that might have antagonised the government.
Suu Kyi's party, which wonalandslide election victory two decades ago that was never recognised by the junta, was disbanded by the military regime last year because it boycotted the latest vote, saying the rules were unfair.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:05 AM0comments Links to this post
English.news.cn 2011-07-25 15:03:21 Feedback Print RSS
YANGON, July 25 (Xinhua) -- Myanmar Union Minister of Labor U Aung Kyi met with noted political figure Aung San Suu Kyi at the Sein Lei Kan Tha State Guest House here Monday and discussed three issues.
U Aung Kyi toldapress briefing shortly after the meeting that the three points discussed are law enforcement, cooperation in eradication of disunity and working for the interest of the people.
He expressed satisfaction over the positive meeting that was held as the first step, saying that more series of discussions will follow in the near future.
Aung San Suu Kyi, when asked, said whoever she meets and whatever done by the government, as long as it benefits the nation, it is up to her expectation.
The meeting between U Aung Kyi and Aung San Suu Kyi, which signified the first dialogue between the new government and Aung San Suu Kyi, lasted for over an hour.
The discussions between the pair took place six days after Aung San Suu Kyi attended the annual 64th state-sponsored ceremony in Yangon last Tuesday, Myanmar Martyrs' Day, commemorating fallen national heroes including her late father General Aung San in historical fight for independence.
The state ceremony, which Aung San Suu Kyi attended for the first time afteranew government was installed, was followed byamass march to the Martyrs' Mausoleum, led by her, and the march, which involved about 3,000 people, met with no government intervention.
Aung San Suu Kyi, 66, was last released from house restriction on Nov. 13, 2010, six days after Myanmar heldamulti-party general election on Nov. 7, 2010.
The NLD, along with four other old political parties, was subsequently disbanded by the Union Election Commission in September 2010 following the NLD's rejection for the re- registration.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:04 AM0comments Links to this post
ပထမဆုံးအကြိမ် တရုတ်က ကချင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆေးဝါးထောက်ပံ့
Thursday, 21 July 2011 22:48 KNG
လိုင်ဇာမှ ဂျေယန်ခ ဒုက္ခသည်စခန်းသစ်ဆီ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်တချို့
ပထမဆုံးအကြိမ် တရုတ်အစိုးရက ယွမ်ငွေ တစ်သိန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၆၂၅) ခန့်တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါးများကို ကချင်ဒုက္ခသည်များအတွက် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်ကထောက်ပံ့ လိုက်သည်ဟု ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ကဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်နယ်စပ်တစ်လျှောက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဒေသရှိ ဒုက္ခသည် ၁၆၀၀၀ ကျော်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ယင်ဂျန်းစီရင်စုအာဏာပိုင်များက ယခုကဲ့သို့ ကူညီလိုက်သည်ဟု လိုင်ဇာKIO ဌာနချုပ်မှ ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဆလန်ကဘာ ဒွဲပီဆာ ပြောသည်။
“ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်။ တရုတ်အစိုးရကနေပြီးတော့ KIO နယ်မြေထဲက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကူအညီပေးတာ” ဟု ဆလန်ကဘာ ဒွဲပီဆာပြောသည်။
ယခင်က တရုတ်အစိုးရမှ မဟုတ်ဘဲ ယင်ဂျန်းစီရင်စု မှ ဂျိန်ဖော့(မြန်မာလို ကချင်)လူမှုအဖွဲ့အစည်းက လိုင်ဇာရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်အိတ် ၁၀၀ နှင့် သွပ်ပြားများ ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု ထပ်ဆိုသည်။
ဇွန် ၉ ရက်မှစတင်ခဲ့သည့် စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် မြန်မာအစိုးရနှင့် KIO ကြားဖြစ်ပွားသည့် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် မြန်မာအစိုးရထိန်းချုပ်သည့် ဒေသမှ ပြည်သူများ တရုတ်နယ်စပ် KIO ထိန်းချုပ်ရာဒေသများသို့ ထွက်ပြေးခိုလုံလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ တိမ်းရှောင်လာကြသူများထဲမှ တစ်ဝက်အား လိုင်ဇာနှင့် အခြား KIO ထိန်းချုပ်ရာဒေသများတွင် ယာယီစခန်း အနည်းဆုံး ၉ ခုဖြင့် နေရာချပေးထားပါသည်။ သို့သော် ကျန်တစ်ဝက်မှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြစ် တောတောင်များထဲ တိမ်းရှောင် ပုန်းကွယ်နေကြသည်ဟု ဆလန်ကဘာ ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIO ကြား တိုက်ပွဲအရှီန် တိုးမြှင့်လာသဖြင့် KIO ထိန်းချုပ်ရာဒေသများသို့ နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်အများအပြား ထပ်မံ ရောက်ရှိလာနေဆဲဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်များသည် မြန်မာအစိုးရ စစ်သားများ၏ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ပေါ်တာဆွဲခြင်းနှင့် အဓ္ဓမပြုကျင့်လာမည်ကို ကြောက်ရွံ့သဖြင့် ထွက်ပြေးနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲ အနည်းစုသာ အစိုးရထိန်းချုပ်သော မြစ်ကြီးနားနှင့် ၀ိုင်းမော်မြို့ကြီးများသို့ ခိုလုံနေကြပါသည်။
မိုးရာသီ ငှက်ဖျား၊ တုပ်ကွေး၊ ကူးစက်ဝမ်းရောဂါများ ဒုက္ခသည်များကြား အဖြစ်များသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုရရှိခြင်းသည် အလွန် အကျိုးရှိသည်ဟု ဆလန်ကဘာ ဒွဲပီဆာ ပြောဆိုသွားသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:37 AM 1 comments Links to this post
ည KIAဗုံးခွဲမှုကြောင့် ဂါးရာယန် တံတား ကျိုးကျ ပျက်စီး
Thursday, 21 July 2011 12:33 KNG
လိုင်ဇာ ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် လုံခြုံရေးယူနေသော KIA စစ်သားတဦး။ ဓါတ်ပုံ-ကချင်သတင်းဌာန
မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်ကားလမ်းရှိ မြစ်ကြီးနားမှ ၃၆ မိုင်အကွာ ဂါးရာယန်(Gara Yang)နှင့် ကဇူး(Kasu) ကြားမှ ပေ ၄၀ ကျော်ရှည်သည့် သံကူကွန်ကရစ် ပုံမွေခ (Pung Mwi Hka) ချောင်းတံတား ဇူလိုင် ၂၀၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၁၁ နာရီကျော်ချိန် KIA ဗုံးခွဲမှုကြောင့် ကျိုးကျ ပျက်စီးသွားသည်ဟု ဒေသခံ မျက်မြင်များပြောသည်။
ယင်းတံတားသည် KIO/KIA ဌာနချုပ် လိုင်ဇာနှင့် ဆက်သွယ်သော အဓိကလမ်းမတွင် တည်ရှိသည်။
“အုတ်မြစ်ချလာတဲ့အပိုင်းပါ ပါမယ်ဆိုရင် ပေ ၁၀၀ ကျော်တယ်။ ခု ရေထဲကျိုးကျသွားတဲ့အပိုင်းက ပေ လေး ငါးဆယ် ရှိမယ်။ ခုဖြတ်နေသည့်သူတွေ ရေကူးပြီး ဖြတ်ကြတယ်။ ကားတော့ဖြတ်လို့မရဘူး။ လိုင်ဇာသွားတဲ့ကားတွေ ခေါက်ပြန်သွားကြတယ်။” ဟု ဒေသခံ တဦး ပြောသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:32 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:49 AM0comments Links to this post
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယူအက်စ်ဒီပီပါတီက လဒ်စားမှူ တိုက်ဖျက်မည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 20 ရက် 2011 ခုနှစ် ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန သတင်း - ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ယူအက်ဒ်ဒီပီပါတီက လဒ်ပေး လဒ်ယူမှူ ပြုလုပ်နေသည့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၊ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအတွင်းလဒ်ပေးလဒ် ယူမှူ ပြုလုပ်နေသူများရှိပါက တိုင်းပါတီဌာနချုပ်သို့ သတင်းပို့ကြရန် ဇွန်လ အတွင်းပြည်သူလူထုအား အကြောင်းကြားထားကြောင်း သိရသည်။
” ကျတော်တို့ပါတီဟာ လက်ရှိအစိုးရဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတော့ လူထု ယုံကြည်မှူရှိဖို့လိုတယ်၊ ” ဟု ကလေး မြို့မှ ကြံ့ဖွံ့ပါတီလူကြီး တဦးက ပြောသည်။
ဇွန်လအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပါင်းစုံမှ ၀န်ထမ်း Papau နှင့် ဦး Bokyi တို့အား သက်ဆိုင်ရာက လဒ်စားမှူဖြင့် အလုပ်ဖြုတ်ထားကြောင်း ယင်းကိစ္စသည် ယူအက်စ်ဒီပီပါတီက တိုင်ကြားမှူ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြသည်။
” အခု ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားရေးဌာနမှ အရေးယူဖို့ သုံးဦးကျန်သေးတယ် ” ဟု ကလေးမြိ့ ပေါ် စန်းမြို့ရပ်ကွက်မှ ဒေသခံ လူကြီးတဦးက ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ယခုကဲ့သို့ လဒ်စားမှူ တိုက်ဖျက်နေခြင်းအပေါ် လူထုအနေဖြင့် ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း သို့သော် အထက်အရာရှိပိုင်း၏ လုပ်ဆောင်မှူအထိ အကျိုးသက်ရောက်စေသင့်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆို နေကြသည်။
” အဲဒါ အဖျားပိုင်းပါ၊ လုပ်ချင်းလုပ်ယင် အထက် အရာရှိပိုင်းကနေ ကိုယ်တွယ်သင့်တယ်” ဟု ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရသည် အာဏာလွဲပြောင်းရယူသည့်နောက်ပိုင်း အစိုးရ ယန္တရားလည်ပတ်ရေးထက် တိုင်းရင်း သား ဒေသများအတွင်း လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်များအား စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေခြင်းကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက် နေ သည်ဟု ပြောဆိုမှူများရှိနေသည်။
” သူတို့အာဏာရယူပြီး ယခုထိ ပြည်သူအတွက် မယ်မယ်ရရလုပ်တာမရှိဘူး၊ ဒီတိုင်းရင်းသားတွေ စစ်ဆင် ရေးလုပ်နေတာက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းလာမှမဟုတ်ဘူး” ဟု ဒေသခံ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:27 AM0comments Links to this post
ထိုင်းရဟတ်ယဉ်မြန်မာနယ်စပ်တွင်ပျက်ကျခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ပို.သတင်းတစ်ရပ်တွင်ဖေါ်ပြပါသည်။ မြန်မာ့အရေးကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိ ဆက်လက်စုံစမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Black Hawk ရဟတ်ယဉ်မှာ အိုစမာဘင်လာဒင်အား တိုက်ပွဲဝင်သော အမေရိကန်လုပ် ရဟတ်ယဉ်ဖြစ်ပါသည်။
Thai Black Hawk crashes in Burma
Published: 19/07/2011 at 01:37 PM
A Thai army Black Hawk helicopter with about 14 people on board, including the commander of the 9th Infantry Division, crashed inside Burma before noon on Tuesday, an army source said.
The source said Maj-Gen Tawan Ruangsri, commander of the 9th Infantry Division, andanumber of army officers were flying to oversee the retrieval of the bodies of five soldiers who were killed inahelicopter crash in Kaeng Krachan National Park in Ratchaburi province, bordering Burma, on Saturday.
Also on board the aircraft were two reporters, the source said.
The Black Hawk crashed inside Burma. Further details were still unavailable.
The army has six Black Hawk helicopters in operation. This is the first to have crashed.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:07 AM0comments Links to this post
ခယာတိုက်ပွဲ၌ မြန်မာစစ်သား ၇ ဦး အရှင်ဖမ်းဆီးရမိ
Tuesday, 19 July 2011 11:01 KNG
ဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီး စစ်မျက်နှာတွင် နေရာယူထားသော ကေအိုင်အေ စစ်သားတစ်ဦး။ ပုံ-ကချင်သတင်းဌာန
ကချင်ပြည်နယ်အရှေ့တောင်ဘက်ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) လိုင်ဇာဌာနချုပ်အနီး ခယာ (Hka Ya) သေတွင် ဖြစ်ပွားသည့် စစ်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား (၇) ဦးအား အရှင် ဖမ်းဆီးရမိသည်ဟု KIA အရာရှိများ ပြောသည်။ ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦးပါဝင်သည့်မြန်မာစစ်သားများမှာ မြစ်ကြီးနားနယ်မြေခံ ခလရ ၂၁ မှဖြစ်သည်။
၎င်းတို့အား လက်နက်ငယ် ၁၇ ခု၊ စက်လက် ၂ ခု၊ ၆၀ မမ မော်တာတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစက်ကြီး တစ်ခုနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသည်ဟု KIA အရာရှိများပြောသည်။ ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှုများကြောင့် ခလရ ၂၁ မှာ တပ်ပြုတ်သွားဟန်ရှိသည်ဟု ထပ်ဆိုသည်။
ခလရ ၂၁ က KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာသို့ ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ် ဇူလိုင် ၁၆ ရက် စနေနေ့တွင် စစ်ပွဲစတင်လာသည်။
KIA ဘက်မှ ဗိုလ်အောင်ဂျာ အမြောက်ကျည်သင့်ကာ လိုင်ဇာဆေးရုံသို့ရောက်ရှိပြီးနောက် သေဆုံးသွားသည် ဟု KIA အရာရှိတစ်ဦးပြောသည်။
၎င်းတို့အား KIA လိုင်ဇာအကျဉ်းထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် စစ်မှန်သည့်နိုင်ငံရေးအဖြေမရဘဲ တိုက်ပွဲမရပ်သင့်ဟု ကချင်ဒေသအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်များ လိုင်ဇာတွင် KIO/KIA အရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် အကြံပေးကြသည်။
၎င်းအစည်းအဝေးအပြီး တိုက်ပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။
အဓိကအားဖြင့် မိုးညှင်းမြို့နယ် ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲဒေသ၊ မန်မော်(ဗန်းမော်)မြို့နယ်နှင့် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်ဒေသများတွင် တိုက်ပွဲအရှိန်တိုးမြှင့်လာသည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:48 AM0comments Links to this post
မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး မလုပ်ရန် KIO ဆွေးနွေး
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 18 ရက် 2011 ခုနှစ် ကချင်သတင်းဌာန သတင်း - ကချင်သတင်းဌာန
မြန်မာစစ်တပ်ကို ဆက်လက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရန် ကချင်ပြည်သူများက သဘောတူ သဖြင့် KIA ဌာနချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများ က အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး မလုပ်တော့ရန်ပြောဆိုညှိနှိုင်း ကြပါသည်။
“လူကြီးတွေက အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲဖို့ဘယ်သူမှ မပြောတော့ဘူး ဘယ်လိုဆက်တိုက်မယ်ဆိုတာကိုပဲပြောကြ တယ်။ ဌာနချုပ်က လူကြီးတွေအားလုံးက တိုက်ခိုက်ဖို့ပဲပြောနေတယ်” ဟုကချင်လွတ်မြောက် ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဥက္ကဌနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ကေအိုင်အို ဥက္ကဌ ဇောင်းဟရား
အစည်းအဝေးကို ကချင်ပြည်နယ် KIO မြို့တော်လိုင်ဇာ တနေရာတွင် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်နှစ်ကြိမ်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းအစည်းအဝေးတွင် KIA ဘက်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် (၁၈)ဦးခန့် တက်ရောက်ပြီး ပြောဆို ညှိနှိုင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။
“မြန်မာစစ်တပ် တို့ကလည်း တစ်ကယ်တမ်း စိတ်ထဲမှာပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး ကစားတာပဲ ဒါကြောင့် တိုက်ပွဲအကြီးဖြစ်သွားဖို့က ပိုများနိုင်တယ်လို့ ဥက္ကဌကပြောတယ်။” ဟု ဥက္ကဌနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဆက်လက်ပြောကြားသွားသည်။
KIO ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့ အလဲန့်ဘွမ် (Alen Bum)တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လှိုင် ၁၂ ရက်မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ နှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားသော လူထုသဘောထား တင်ပြဆွေးနွေးမှုတွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA အပစ်ရပ်စဲရေးကို ကချင်ပြည်သူများက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:27 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:07 PM0comments Links to this post
UWSA ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်က တရုတ်၌ သာလက်နက်ချမည်ဟုဆို
UWSA တပ်အနေဖြင့် စစ်အစိုးရထံတွင်လက်နက်ချလိုခြင်းမရှိပဲ တရုတ်၌ သာလက်နက်ချမည်ဟု ရှမ်းသံတော် ဆင့်သတင်းတစ်ပုဒ်တွင်ဖတ်လိုက်ရ၏ ။ ကျွန်ုပ်တို.အနေဖြင့် အလွန်ထူးဆန်းသော သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါသည်။ လက်နက်ဆိုသည်မှ မကိုင်ချင်လျှင် မိမိသဘောဖြင့်စွန်.လွတ်လို.ရသော ကိစ္စ သာလျှင်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို.ကခံယူပါသည်။ မည်သူ.ထံမှလက်နက်ချနေစရာမလိုပါ။ နောက်တစ်နည်း က မိမိလက်နက်မကိုင်လိုလျှင် အခြားသောလက်နက်ကိုင် အင်အားစု များသို.လက်နက် ပေးလိုက်ရန်သာ အကြောင်းရှိပါ၏။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:39 AM 1 comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:51 AM0comments Links to this post
တိုင်းရင်းသားများအရေးကိစ္စတွင်စစ်ရေးနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို.သဘောမတူသော်လည်း၊ မြန်မာ့အရေးကိစ္စတွင် တရုတ်အား ဆရာတင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို.ကန်.ကွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
KIO နေဖြင့် UNITED NATION သို.တိုက်ရိုက်တင်ပြသင့်သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအားဒိုင်သူကြီး လုပ်ခိုင်း နေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို.အနေဖြင့်လုံးဝသဘောမတူပါ။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အမြဲဆန်.ကျင်နေသော တရုတ်ပြည်အားကျွန်ုပ်တို.အယုံအကြည်မရှိပါ။
ထိုသို. မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအား မလိုလားသော တရုတ်ပြည်၏ မူဝါဒ မှာလည်း ပြည်တွင်းရေးအားရှုပ်ထွေး အောင်သာလုပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို.ကယုံကြည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို.သည်လည်း တော်လှန်သူများဖြစ်သည့်အလျှောက် တော်လှန်သူ ဆိုသည်မှာ အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံများ၏ အကူအညီကိုယူရ ခြင်းကိုကန်.ကွက်လိုခြင်းမရှိပါ။
အိမ်နီးနားခြင်းတိုင်းပြည်များ၏ အကူအညီကိုယူပုံယူနည်း ကအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အကူအညီမယူတတ်လျှင် ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 8:46 AM0comments Links to this post
လာဘ်စားမှု သတင်းများပေးပို.ပါကဖေါ်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ လာဘ်စားမှုများဖေါ်ထုပ်ရေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ ယာဉ်ထိန်းရဲများ လာဘ်စားသည်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တိုင်ကြားထားကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးတင်မောင်ဦးက ပြောသည်။
အစိုးရသစ်၏ အဓိက လုပ်ငန်းတရပ်ဖြစ်သော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဝိုင်းဝန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် တိုင်ကြားရသည်ဟု သူက ဆိုသည်။ သို့သော် ရွှေပြည်သာ သာမက အခြားမြို့နယ်များပါ ထိုသို့လာဘ်စားမှုများ ရှိနေပြီး၊ ခရီးသည်တင် ယာဉ်များ၊ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်များက နေ့စဉ်
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကို ရေတို စီမံကိန်းအနေနှင့် ချက်ချင်းဖြေရှင်းရန် မလွယ်သဖြင့် ရေရှည် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်
ဖြစ်ကာ၊ အဓိက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူများ ဖြစ်ပွားနေသည့် နေရာများတွင် လေ့လာရမည့် အပြင် လစာဝင်ငွေနှင့် ကိုက်ညီမျှတသော ကုန်ဈေးနှုန်းလည်း ရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု သူက ပြောဆိုသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 9:37 AM0comments Links to this post
နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခဲ့သူများကို အစိုးရပိုင် သတင်းစာ ဆောင်းပါး တပုဒ်က ဝေဖန်
နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သူ အဆက်ဆက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတို့ အရေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း အစိုးရပိုင် သတင်းစာ တစ်စောင် ဖြစ်သော ကြေးမုံ သတင်းစာပါ ဆောင်းပါး တပုဒ်က ဝေဖန် ရေးသားလိုက်သည်။
ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးရှင် ဝေယံမောင်၏ " တိုင်းရင်းပီစွာ ရိုင်းပင်းညီကာ ၀ိုင်းဝန်း ပါဝင်ကြပါစို့ " ဆောင်းပါးတွင် ဝေဖန်ချက်ကို ထိုသို့ ရေးသားဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ ဝေယံမောင်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရမည် ဆိုလျှင် ရေမြေတောတောင် သဘာဝနှင့် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝလှသည့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ၊ မြေကြီးက ရွှေသီးသည်ဟု တင်စားသည့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်တွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမူ ၂၆ ရာခိုင်နုန်း ကျော်ခဲ့ရခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်သူ အဆက်ဆက်တို့က ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတို့၏ အရေးကို လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သလောက် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။
၎င်းပြင်သူက အုပ်ချုပ်မူ အားနည်းခြင်းနှင့် အထူးအခွင့်အရေးများ ပေးခြင်း တို့ကြောင့် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမူ မြင့်မားခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်နေကြရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေတ် အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်မူ အားနည်းခြင်းတို့၏ ရလဒ်ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ နှေးကွေးခဲ့ရကြောင်း၊ လက်တစ်ဆုတ်စာ လူတန်းစားတို့၏ အခွင့်ထူးခံ လုပ်ရပ်များကြောင်း ပြည်သူအများစု နစ်နာခဲ့ရသည်။ တိုင်းပြည်၏ အကျိုးစီးပွား အကျိုးမဲ့စွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဟုလည်း ဖေါ်ပြထားသည်။
စာရေးသူ ဝေယံမောင်က တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ အဆက်ဆက်ကို ပြောဆို ဝေဖန်ထားသဖြင့် တိုင်းပြည် အာဏာကို နှစ်ပေါင်း ၂၃ နှစ် ကြာ ရယူ ထားခဲ့သော စစ်အစိုးရအားလည်း သူ့ဆောင်းပါးက အရှက်ရစေလိမ့်မည်ဟု စာဖတ်သူများက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
၎င်းပြင် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကောင်းစားနေသော လက်တဆုတ်စာ လူတန်းစားမှာ ယခင် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သွားခဲ့သော တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် နီးစပ်သူများ ဖြစ်သဖြင့် ဝေယံမောင်၏ ဆောင်းပါးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေအပါအ၀င် သန်းကြွယ် သူဌေး ဦးတေဇတို့၏ အရှိုက်ကို လက်သီး တိုက်ရိုက် ထိမှန်သွားသလို ခံစားရမည့် ဆောင်းတပါး တပုဒ်အဖြစ် စာဖတ်သူများက ရှု့မြင်နေကြရသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:14 AM2comments Links to this post
ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင် များလာရန် လစာပေးစည်းရုံးနေ
လက်ရှိ အာဏာရပါတီဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) သည် ပါတီဝင် များပြားလာစေရန် အတွက် ကြံ့ဖွံ့မြို့နယ်၊ ခရိုင်ရုံးများနှင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများရှိ ရုံးများတွင် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များကို လစာပေးမည်ဟု ဆိုကာ စည်းရုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိရသည်။
ကြံ့ဖွံ့ ပါတီဝင်များကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသကြီးအဆင့်များ ခွဲကာ လစာ သတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ အလုပ်အမှုဆောင် တဦးကဆိုသည်။
“မြို့နယ်အဆင့်ဆို ကျပ် ၆ သောင်းကနေ ၈ သောင်းပေးမယ်၊ သူအဆင့်နဲ့ သူပေါ့။ ခရိုင်အဆင့် EC တွေဆို လစာက မြို့နယ် အဆင့်ထက် ၁ သောင်းကနေ ၂ သောင်းအထိ ပိုရမယ်” ဟု အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များကို လစာများဖြင့် ခန့်ထားရာတွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသွားသော လွှတ်တော် အမတ်များ ပါဝင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ပါတီဝင်လာစေရန် စည်းရုံးမှု တခုသာဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးသမား တချို့က ပြောနေကြသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီအတွက် ရပ်ကွက်အဆင့် စည်းရုံး လှုပ်ရှားခဲ့သူများကို မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင် များအဖြစ် ရာထူးတိုးပေးခဲ့ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အာဏာမှာလည်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များထက် ပိုမိုရရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များသည် ရပ်ကွက်များအတွင်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ဘွဲ့ရ လူငယ်များအား ရာထူး၊ အခွင့်ထူးများ ပေးမည်ဟု ဆိုကာ စည်းရုံးလျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန် သာကေတမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံ လူငယ် တဦးက ဆိုသည်။
“ဒါက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်စည်းရုံးမှုလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်တုန်းကလည်း ပါတီဝင်ပါလား၊ လူငယ်လည်းဖြစ်တယ်၊ ဘွဲ့လည်းရထားတော့ ဂျပန်ခရီးစဉ်တွေ ဘာတွေ လွှတ်ရင် သွားရမယ်လို့ ပြောပြီး မဲဆွယ်တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
အောက်ခြေအဆင့် ပါတီဝင်များ တိုးချဲ့ စုဆောင်းရာတွင် ရာထူးနေရာ အသစ်များကိုပါ တီထွင်ခန့်ထားခြင်းဖြင့် မက်လုံးပေးပြီး ဘွဲ့ရ ပညာတက်များကို ဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ပါတီဝင်ခန့်ထားခွင့်ရရန် သိမ်းသွင်းမှုများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ တို့မှ ပါတီဝင် လူငယ်များ၊ အသက် ၃၅ နှစ် အောက် နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးစီနှင့် စုစုပေါင်း လူ ၂၀ ခန့်ကို ဂျပန်ပါလီမန် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ယခုလအတွင်း စေလွှတ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ပါတီသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၃၂၅ နယ်အနက် ၂၅၉ နယ်၌လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲ ဆန္ဒနယ် ၁၆၈ နယ် အနက် ၁၂၉ နယ်၌ လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၆၆၁ နယ်အနက် ၄၉၄ နယ်၌ လည်းကောင်း အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၁၅၄ နေရာ အနက် ၈၈၂ နေရာ၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဟု အစိုးက ကြေညာခဲ့သည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့သစ်ကို သူရဦးရွှေမန်း (ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးဌေးဦး (အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး)၊ ဦးသောင်း (အတွင်းရေးမှူး)၊ ဦးတင်ထွတ် (အတွင်းရေးမှုး)၊ ဦးအောင်သောင်း (အတွင်းရေးမှူး)၊ ဦးသိန်းဇော် (အတွင်းရေးမှူး)၊ ဦးစိုးသာ (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်) အပါအဝင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၁၇ ဦးတို့ဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းထားသည်
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:03 AM0comments Links to this post
Wednesday, 13 July 2011 19:56 KNG
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:46 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:24 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:50 AM0comments Links to this post